विस्तारित बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको फरक मतलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा उनले भारत नै प्रधान शत्रु' भएको किटानीसमेत गरे। अन्तराष्ट्रिय जनमत तयार गर्दै भारतले माओवादी पार्टी र क्रान्तिलाई सिध्याउने योजना बुनिरहेको दाहालले आरोप लगाए।
'राजतन्तको अन्त्यसँगै प्रधानअन्तरविरोधको रुप फेरिएको छ। सम्पन दलाल, नोकरशाही र भारतीय विस्तारवाद नै हाम्रो मुख्य शस्त्रु हुन्,' दाहालले भने, 'अब राष्ट्रिय युद्ध तयारी गर्दै जनविद्रोहमा जानुपर्छ। यो भेलाले राष्ट्रिय प्रतिरोध गर्न सक्ने आन्दोलनको योजना बनाउनुपर्छ।'
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि भारतको सत्ता पक्षबाट अनेक षड्यन्त्र रचिएको रहस्य पाँच हजार कार्यकर्तामाझ उनले खोले। 'रौतहट हत्याकाण्डमा भारतकै मान्छेहरु आइ गोली चलाएका हुन्, यो कुरा उपेन्द्र यादवले पनि मलाई भन्नुभएको थियो', दाहालले अगाडि भने, 'रुकमांगत कटुवाल कारबाही भारतकै कारण भएको हो, कांग्रेस-एमालेका कारण होइन।'
अहिलेको सरकार गठन प्रक्रिया पनि भारतकै कारण अवरुद्ध भएको दाहालको दाबी छ। 'अमेरिकी राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गर्नु दुई साताअघि मात्र भारतले हामीले क्यान्टोनमेन्टमा भारतीय माओवादीलाई तालिम दिएको आरोप लगायो,' उनले भने, 'त्यतिमात्र नभइ हामीलाई लस्कर ए तोइबाजस्ता आंतकवादी संगठनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्ल्याई सिध्याउने रणनीतिमा भारत छ, यसबारे हामी सचेत हुनुपर्छ।'
दाहालले मंगलबार राखेको अढाई घण्टा लामो मन्तब्यमा 'प्रधान शत्रु' को विषयमा उनको मत वैद्यसँग मिलेको छ। वैद्यले सोमबार भारतीय संस्थापन पक्षलाई 'न्युट्रलाईज' गर्न त्यहाँका जनयुद्धरत माओवादी पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले क्रान्ति सम्पन्नपछि सम्भावित भारतीय हस्क्षेपलाई त्यहाँकै अन्य शक्तिबाट रोक्न सकिने तर्क राखेका हुन्।
दाहाल र वैद्यको तर्कप्रति अर्का उपाध्यक्ष भट्टराई सहमत छैनन्। भट्टराईले अहिलेको अवस्थामा भारतलाई चिढ्याएर होइन, उसलाई न्युट्रलाईज गरेर मात्र विद्रोहको योजना बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। भारतले हस्तक्षेप गरेकेा वेला राष्ट्संघले सघाउने खालको वातावरण नबनेसम्म क्रान्ति सफल नहुने भट्टराईको धारणा छ।
राष्ट्रियता र जनवादको विषयमा भट्टराईको विश्लेषण बेठीक भएको दाहालको दाबी छ।
'मेरो राजिनामाको ड्राफ्ट नै डा भट्टराईले गर्नु भएको हो, त्यहाँ विदेशी प्रभुको हस्तक्षेप स्वकार्ने दिन गयो भनिएको छ', उनले भने, 'विस्तारवादलाई विरोध गर्ने सवालमा भारतलाई छुट्टै राखेर हेर्नुपर्छ भनेर भट्टराईले भन्नुभएको छ, त्यो उहाको दृष्टिदोष हो। यसमा उहाँ क्लियर हुनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ।'
शान्ति प्रक्रियाको चार वर्ष १० वर्षे जनयुद्धभन्दा बढी जोखिमपूर्ण रहेकेा दाहालले प्रष्टाए। उनले भने, 'यसबीचमा पार्टीलाई जनव्यापी बनाउन सकेका छौं। यो एउटा घुम्ती हो, हामी त्यही घुम्तीमा यात्रा गरिरहेका छौं।'
दाहालले मंगलबार वैद्य र भट्टराईले लगाएको विभिन्न आरोपको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
अध्यक्षको छुट्टै र मार्क्सवादी लाइन नभएको वैद्यको आरोपप्रति दाहालले प्रतिवाद गरे।
'कार्ययोजना अरुको, नेतृत्व मेरो भन्नु भएको छ, त्यो गैरमार्क्सवादी हो', दाहालले भने, 'अहिले नेतृत्वको विचार छैन भन्नेहरुले किन त्यतिखेर मलाई देवत्वकरण गराउनतिर लाग्नुभयो? त्यो भनेको क्रान्तिको कुरा गर्ने तर क्रान्तिको सिन्को नभाच्ने, एमाले र मोहनविक्रम प्रवृति हो, जसबाट क्रान्ति सफल हुँदैन'
'चुनवाङ भट्टराईको र खरिपार्टी किरणको भनेर तानातान गर्ने प्रवृति मार्क्सवाद संगत छैन, र त्यो उहाँहरुको आत्मरति मात्र हो। त्यो यो वा कसैको नभइ सामुहिक नेतृत्वको सामुहिक निर्णयको दस्तावेज हो,' दाहालले थप प्रष्टाए।
'हिजो किरण कमरेडले अवसरवादीको बाहुल्य बनाएर जित्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो, त्यसले मलाई राति अवेरसम्म निद्रा परेन,' मन्तब्यको सुरुवातमै दाहालले उत्तेजित हुँदै भने, 'को छ र यहाँ अवसरवादी? कसलाई भनेको हो, त्यो उहाँ (वैद्य) ले स्पष्ट भन्नुपर्छ।'
अध्यक्षले क्रान्तिको लाइन कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने आरोपको पनि उनले खरो ढंगले प्रतिवाद गरे। 'मैले क्रान्तिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गरेन भन्नु ठीक होइन', उनले भने, 'त्यसमा मलाई बरु अरुले सहयोग गरेन कि π त्यसबारे पनि प्रष्ट मूल्याकंन गरौं।'
वैद्य र भट्टराईले आर्थिक कारोबार हिनामिना गरेको भन्ने आरोप पनि मिथ्या भएको दाहालको जिकिर छ। 'पार्टीमा मैले के कति खर्च गरे, त्यसको हिसाबकिताब बनाएर ल्याएको छु, अरुले पनि देखाउनुपर्छ।'
सोमबार भट्टराईले लोकतान्तिक गणतन्त्रको कार्यदिशा ल्याउँदा कारबाही गरिएकोबारे दाहालसँग स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। 'उहाँलाई दरबारसँग हेर्ने दृष्टिकोणमा कारबाही गरिएको होइन,' उनले भने, 'पार्टीभित्रको गोप्य सूचना बाहिर ल्याएकोमा कारबाही गरिएको हो।'
दाहालले शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि थुप्रै कमजोरीसमेत गरेको स्वीकारे। 'जनसत्ताको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विघटन गर्नु, जनअदालतको भंग गर्नु आफ्नो कमजोरी रह्यो। जनयुद्धको योद्धा, घाइते, वेपत्ताका विषयमा ध्यान दिन नसक्नुबारे समग्र समीक्षा महाधिवेशनमा गर्नुपर्छ।'
सोमबार भट्टराईले संविधानसभाको चुनावपछि क्रान्तिको तयारीका लागि मुल नेतृत्व बाहिर रहनुपर्नेमा आफै सरकारमा जान दौडधुप गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। 'हो, सरकारमा कि पुरै टीम जानुपर्दथ्यो, कि अध्यक्ष जानु हुँदैनथ्यो तर त्यस्तो निर्णय भएन', दाहालले अगाडि भने, 'त्यसमा अनन्त (वर्षमान पुन) जस्ता युवा सदनमा आए, विप्लब (नेत्रविक्रम चन्द) जस्ता त्यहाँ परेन, त्यो वेला छनौट गर्ने सिलसिलामा गल्ती भएकै हो।'
दाहालले पार्टीभित्र उत्तराधिकारी निर्माण गर्न ३/१ (अग्रज, प्रोड र युवा) को दस्ता निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'शान्तिप्रक्रियामा यस विषयमा नेतृत्व चुकेको छ, अब त्यसलाई सच्चाएर अघि बढ्नेछु।'
दाहालले मन्तब्यको अन्तिमा भने, 'सत्य अन्वेषणको रुपमा लाईन संघर्ष हुनुपर्छ, हारजितको रुपमा होइन। पार्टीभित्रको समस्या समाधानको उन्नत उपाय जनवाद नै हो। यी दुबै कुरा खरिपाटी भेलामा उठाएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। तर पार्टीलाई कदापि फुटन् दिन्न।'
नमरूञ्जेल अध्यक्ष बन्ने होइन : दाहालको भाषण जस्ताको तस्तै
लडाकूमध्ये बोल्नेको विवाद
वैद्यलाई फकाउने प्रयासवैद्य पक्षधरको विद्रोह